Archdiocese of Mandalay blog: မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (အပိုင်း ၁၉)
မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (အပိုင်း ၁၉)
မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (အပိုင်း ၁၈)
ဖါသာရ် ပန်တာလေ အိုဂျော့ ဦးမောင်ငယ်
(Fr.George. U Mg Ngai)
ဖါသာရ်ဂျော့ ဦးမောင်ငယ်၏ ဖခင်မှာ ချမ်းသာရွာမှ ဦးပေါ်အေးဖြစ်၍ မိခင်မှာ အောက်မြန်မာနိုင်ငံမှ ဖြစ်သည်။ (၁၉၁၂) ခုတွင် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ၀င်သည်။ ၄င်းမှ ပီနန် ရဟန်းဖြစ်တက္ကသိုလ်တွင် (၆)နှစ် ပညာသင်ကြားပြီးနောက် (၁၉၂၅)ခု ဇန္န္န၀ါရီလ (၂၅)ရက်နေ့၌ မန္တလေးမြို့ ကာသီဒရယ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ ရဟန်းသိက္ခာခံ ယူပြီးနောက် (၁၉၂၅)ခု စက်တင်ဘာလမှ (၁၉၂၉)ခု ဇွန်လအထိ ရွာတော်ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူရသည်။ ဖါသာရ်ေ ဂျာ့သည် (၁၉၃၀) မှ (၁၉၃၂) အထိ ဖါသာရ်လောရန်းနှင့် အတူ နဘက်ရွာ ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူရသည်။ (၁၉၃၀) ကုန်ခါနီး ဖါသာရ်လောရန်း ပျံတော်မူသဖြင့် တပါးတည်း နဘက်ဘာသာဝင်များကို (၁၉၃၂) အထိ ကြည့်ရူခဲ့ရသည်။ ထိုနောက် ဗန်းမော်မြို့တွင် သွားရောက်၍ အမှုထမ်းပြီးနောက် မန္တလေးမြို့ စိန်ဇေးဗီးယားကျောင်းတွင် ဖါသာရ် အလက္ကဇန္ဒားအား ကူညီရန် စေလွှတ်ခြင်း ခံရသည်။
ထိုအချိန်တွင် ဖါသာရ် အလက္ကဇန္ဒားသည် စိန်ဇေးဗီးယား ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူရုံမကဘဲ တာမာလ်
အင်္ဂလိပ် အထက်တန်းကျောင်းကို ကျောင်းအုပ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရသည်။ ဖါသာရ် အလက္ကဇန္ဒားသည် ကလယ်အမျိုးသားတို့၏ ဘာသာရေး၊ပညာရေးနှင့် မြစ်ငယ်သာသနာရေးကို ပါဆောင်ရွက်ရသဖြင့် အလုပ်ကိစ္စ များပြားလှသောကြောင့် ဖါသာရ်ဂျော့ကို ကူညီရန် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဖါသာရ် အလက္ကဇန္ဒားသည် သာသနာတော်ကြီးပွား တိုးတက်ရန် နယ်သစ်ဌာနသစ် ဖွင့်ရန် ကြံရွယ်တော်မူသည့်အတိုင်း မန္တလေးမြို့နှင့် (၁၇)မိုင်ဝေးသော မေမြို့သွားသော လမ်းဘေး အနီး မြစ်ငယ်မြစ်ခေါ် ဒုတ္ထ၀တီမြစ်ကမ်းပါး အနီးရှိ ကထီရွာတွင် အခြေစိုက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသရှိ ကျွဲနဖါးရွာ ကျောက်ကြောရွာ၊ စွံရဲရွာ၊ရွေးလက်ဝဲရွာများပါ တဖြည်းဖြည်း သာသနာ ပျံ့ပွားအောင် ကြံရွယ်လျက် စာသင်ပြပေးခြင်း၊ ဆေးကုသပေးခြင်း၊ မွေးဖွားစ ကလေးများကို ဆေးကြောခြင်း မင်္ဂလာပေးခြင်း၊ စသည်တို့ဖြင့် စတင်ကာ သာသနာပြုလျက်ရှိသည်။
(၁၉၄၂) ခုနှစ် ဗြိတိသျှအစိုးရမင်းများ မြန်မာပြည်မှ ထွက်ခွာသွား၍ ဂျပန်များ ၀င်ရောက်လာကြသည်။ ဂျပန်များ ကျောက်ဆည်ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ရောက်ရှိလာသောအချိန်တွင် မန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိ အဆောက်အဦးကြီးများကို ဂျပန်က လေယာဉ်ဖြင့် ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်သည်။ ဤသို့ ဗုံးချစဉ် ၀ါကျွတ်အခါကြီး ရက်ကြီး သောကြာနေ့ကြီး၌ စိန်ဇေးဗီးယားဘုရားကျောင်း ဘုန်းကြီးနေကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ သီလရှင်ကျောင်းများ ဗုံးထိမှန်သဖြင့် ကျောင်းအိပ် ကျောင်းစား ဘော်ဒါ ကျောင်းသား ကျောင်းသူကလေးများ၊ သီလရှင်များနှင့် ဘာသာဝင်အချို့ ကတီရွာသို့ ရွှေ့ပြောင်းကြသည်။ ထိုနောက် သီလှရှင်များနှင့် ကျောင်းသူကလေးများကို ဆရာတော်ကြီးက ပြန်ခေါ်ပြီး စစ်ဘေးကင်းရာ ဗန်းမော်သို့ ပို့လိုက်သည်။ ကတီရွာတွင် ဘုန်းကြီးနှစ်ပါး ဘာသာဝင်အချို့နှင့် မိဖမဲ့ကလေးများသာ ကျန်ရစ်သည်။
သီလရှင်များ ပြောင်းရွှေ့သွားပြီးနောက် မကြာမီ တနေ့တွင် ည (၇)နာရီအချိန်လောက် လူဆိုး ဓါးပြ (၂၀၀) ကျော်လောက် ရောက်လာကြပြီး ကျောင်းကိုဝိုင်းကာ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ကြသည်။ ဖါသာရ်အလက္ကဇန္ဒားမှာ သေနတ်ထိ မှန်၍ ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရပြီး လဲနေသည်။ ကျောင်းအောက်ရှိ ဘာသာဝင်အချို့တို့မှာ သေနတ် ထိမှန်ကြသော်လည်း ဒဏ်ရာ မပြင်းထန်ကြ။ထွက်ပြေး တိန်းရှောင်နိုင်ကြသည်။ ဓားပြများသည် ကျောင်းပေါ်သို့တက်၍ ဘုန်းတော်ကြီးများကို လိုက်လံ ရှာဖွေကြရာ သေနတ်ထိမှန်သော ဖါသာရ်အလက္ကဇန္ဒားကို ပွေ့ဖက်ကူမလျက် ရှိသော ဖါသာဂျော့က အမျိုးမျိုး တောင်းပန်သော်လည်း ပါရှိသောဓားဖြင့် အပိုင်းပိုင်း ခုတ်သတ်လေသည်။ တွေ့ရှိသမျှသော ကျောင်းသားလေးတချို့ကိုလည်း ဓားနှင့် အပိုင်းပိုင်း ခုတ်သတ်ပြီး အစပြတ်အောင် ကျောင်းကိုပါ မီးရှို့ပစ်ကြသည်။ မီးလောင်ပြီး ကြွင်းကျန်ရစ်သော ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ အရိုးများကို ဇော်ဂျီဘုန်းတော်ကြီးက သယ်ယူပြီး ဇော်ဂျီ သင်္ချိုင်းတွင် သင်္ဂြိုဟ်သည်။
ဖါသာရ်ဂျိုးဇက် ဦးဝင်း (၁၉၀၁-၁၉၆၅)
(Fr.Joseph U Win)
ဖါသာရ်ဂျိုးဇက် ဦးဝင်းသည် (၁၉၀၁)ခု အောက်တိုဘာလ (၁၄)ရက်နေ့တွင် ချမ်းသာရွာ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဦးဘိုးဇွင်နှင့် ဒေါ်အန်နားတို့ ဖြစ်သည်။ မွေးခြင်း (၆)ယောက်ရှိသည့်အနက် ဒုတိယသားကြီး ဖြစ်သည်။ သား(၃)ယောက်ရှိသည့် အနက် (၃)ယောက် စလုံး ရဟန်းဖြစ်ကြသည်။ ဖါသာရ် ဂျိုးဇက်ဦးဝင်းသည် (၁၉၁၃)ခုတွင် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ၀င်သည်။ (၁၉၁၆) မှ (၁၉၂၄)အထိ ပီနန် ရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်တွင် ပညာအ၀၀ကို ဆည်းပူးခဲ့ပြီး (၁၉၂၆) ဇန္န္န၀ါရီလ (၃၁)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ ကာသီဒရယ် ဘုရားကျောင်း၌ ဆရာတော်ဖူးလ်ကီးယေး လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ ပထမ သာသနာပြု အဖြစ် ဗန်းမော်မြို့နယ် နန်းလှိုင်ကျေးရွာတွင် သီတင်းသုံးခဲ့သည်။ ထို့နောက် (၁၉၂၇) မှ (၁၉၃၂)အထိ ချောင်းဦးကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ဖါသာရ် ဂျိုးဇက်ဦးဝင်းသည် ချောင်းဦးမြို့ရှိ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပင့်ဆောင်ခံရသော သခင်မဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးကို ဆောက်လုပ် ပြီးစီးခဲ့သည်။ဤဘုရားကျောင်းကြီးကို ဘုရားကျောင်းတကာ ဦးထွန်းနှင့် ဒေါ်ဖွားသွယ်တို့၏ လှူဒါန်းငွေတို့ဖြင့် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ (၁၉၃၂)ခုတွင် မန္တလေးမြို့ ရွှေနှလုံးတော်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်ကြီး၏ ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ အမှုထမ်းရသည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဂျပန်တို့၏ ဗုံးဒဏ်ကြောင့် မီးလောင်ပျက်စီးသွားသော ရွှေနှလုံးတော် ဘုရားကျောင်းတော်ကြီးကို (၁၉၅၁)ခုနှစ်တွင် ရဟန်းဝါတော် (၂၅)နှစ်မြောက် ငွေရတုသဘင်ပွဲတော်ကြီးကို မန္တလေးမြို့၌ စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။
(၁၉၅၄) ခုနှစ် ဧပြီလ (၉)ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနုက မြန်မာတိုင်းရင်းသား ရဟန်းတော်များအား ရောမသို့ ဘုရားဖူး စေလွှတ်ခဲ့သည်။ မန္တလေး ရွှေနှလုံးတော် ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော ဖါသာရ်ဂျိုးဇက်ဦးဝင်းက ခေါင်းဆောင်အဖြစ် လိုက်ပါသွားသည်။ ဧပြီလ (၁၀) ရက်နေ့ ည(၈)နာရီတွင် ရဟန်းမင်းကြီး သီတင်သုံးတော်မူသော ရောမမြို့သို့ လေယာဉ်ခရီးဖြင့် ဆိုက်ရောက်ကြသည်။ ထိုနေ့ ထိုရက်သည် ခေါင်းဆောင်အဖြစ် လိုက်ပါသွားသော ဖါသာရ်ဂျိုးဇက်အား ဆရာတော်ကြီး အဖြစ်သို့ တင်မြှောက် ခန့်ထားသော နေ့ရက် မင်္ဂလာ ဖြစ်သည်။ ရဟန်းမင်းကြီး ပေးအပ်တော်မူသော ဆရာတော်ကြီး သိက္ခာကို ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် မွန်တီနီ ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ထံမှ ဧပြီလ (၂၀)ရက်နေ့တွင် ရရှိသည်ကစ၍ ဆရာတော် မွန်ဆီညော် ဂျိုးဇက်သည် ဆရာတော်၏ အဆောင်အရောင်ဖြစ်သော ခရစ္စတူးနှင့် ဖဲပြား ခါးပတ်ကို ၀တ်ဆင်ရ ပေတော့သည်။ ဘုရားဖူး ကြွမြန်းခဲ့ကြသည့် အနယ်နယ်ကပင် ခရီးဦးကြို ပြုလျက် ဂုဏ်ပြုကြသည် သာမက မြန်မာ တိုင်းရင်းသား ဆရာတော်ကြီး၏ ကောင်းကြီးဘင်သောင် မင်္ဂလာကို ခံယူလိုပါကြောင်း တောင်းလျောက် မေတ္တာရပ်ခံကြသည့် အလျောက် ကြွမြန်းခဲ့သည့် ဒေသတိုင်းတွင် ဆရာတော် မွန်ဆီညော် ဂျိုးဇက်က ကောင်းကြီး ပေးခဲ့ရသည်။ သို့ဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနုနှင့်တကွ နိုင်ငံတော်သား အားလုံးတို့၏ ဗမာကို ကမ္ဘာကသိစေရမည် ဟူသော လိုအင်ဆန္ဒမှာ ယခုချိန်ခါဝယ် ပြည့်ဝခဲ့ပေပြီ။ မြန်မာ၏ ဂုဏ်အလင်းရောင်သည် ကမ္ဘာတွင် ထွန်းပြောင်ခဲ့ပေပြီ။မွန်ဆီညော် ဂျိုးဇက်ဦးဝင်းသည် (၁၉၅၄) ခု ဇူလိုင်လ (၁၈)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၌ ဆရာတော် သိက္ခာခံယူသည်။ အိန္ဒိယပြည် နယူးဒေလီမှ ရဟန်းမင်းကြီး၏ ကိုယ်စလှယ်တော် မာတင်လူးကပ်စ်သည် ဆရာတော် သိက္ခာတင်ပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဆရာတော် သိက္ခာတင်ပွဲသို့ တက်ရောက်ကြသော လူထု ပရိတ်ဿတ်မှာ ခန်းမှန်းခြေ (၃၀၀၀)ကျော်မျှ ရှိပေသည်။ ပရိတ်သတ် အပေါင်းအား သိက္ခာတင် အခန်းအနားအကြောင်း ကောင်းစွာနားလည်စေရန် ရွှေဘိုမြို့ ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီး ဘိသိတ်ခံ ဆရာတော်ကြီး၏ ညီအရင်းတော်သူ ဖါသာရ်အန်ထော်နီက ပုလဲစီ ရွှဲစီသကဲ့သို့ တဆင့်ပြီး တဆင့် ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ အသံချဲ့စက်ဖြင့် မိန့်ဟပြောကြားပေးတော်မူရာ သိက္ခာတင်ခြင်း အခန်းအနားကြီးအား ထိရောက်စွာ အကူအညီ တရပ်ကို တဘက်မှ ဖြည့််စွက်ခြင်း ဖြစ်စေ၏။ သိက္ခာတင်ပွဲအခန်းအနားကို စိန်ပီတာကျောင်း အားကစားကွင်းတွင် ပေ (၁၄၀x၁၀၀)ရှိ အဆင့်ငါးခန်းမဏ္ဍပ်ကြီး ဆောက်၍ ကျင်းပသည်။ ၁
ဆရာတော် ဂျိုးဇက်ဦးဝင်း၏ ဆရာတော်သိက္ခာတင်ပွဲ အခန်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနုနှင့် ၀န်ကြီးဦးဝင်းတို့မှာ အလွှဲမရှောင်သာ အရေးပေါ် အထူး ကိစ္စကြောင့် မတက်ရောက်နိုင်သဖြင့် ၀မ်းနည်းသည့် စာချွန်တော်ကို၎င်းတို့၏ ကိုယ်စား မန္တလေးတိုင်းမင်းကြီး ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်၍ ဆက်သ ပေးအပ်သည်။
မြင့်မြတ်လှသော ဆရာတော်၏ ဂုဏ်ထူးကို ခံယူရသဖြင့် ကျွန်ုပ်ဝန်ကြီးချုပ်က မွန်ဆီညော် ဂျေဂျိုးဇက်အား အထူးဝမ်းသာ အားရဖြစ်ရခြင်းကား မြန်မာပြည် ကက်သလစ်သာသနာ ရာဇ၀င်တွင် ပြည်ထောင်စုသား မြန်မာလူမျိုးထဲမှ ပထမဦးဆုံး ထိုကဲ့သို့ ထူးကဲသော ရာထူးသို့ တင်သောကြောင့်ပေတည်း။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ချီးမြှင့်လိုပါသော်လည်း ပြည်ထောင်စု၏ များမြောင်လှသော အရေးကြီးသည့် အလုပ် ၀တ္တရားများကြောင့် မတက်နိုင်သဖြင့် ၀မ်းနည်းပါ၏။ သို့ဖြစ်၍ ဤနှုတ်ဆက်စာ အားဖြင့်သာလျှင် တင်းတိမ်လိုက်ရပါ၏။ သာသနာပိုင် ရဟန်းမင်းကြီးက တင်မြှောက်ပေးလိုက်သော ဤရာထူး၏ ၀တ္တရားများကို ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၎င်း။ ခရစ်ယာန် ဘာသာတူ ပြည်ထောင်စုသားတို့၏ ကောင်းသော ရှေ့ဆောင်ဖြစ်နိုင်ရန်၎င်း၊ ကျွန်ုပ် ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါသည်။ ၂
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုနှင့် သာသနာရေးဝန်ကြီး ဦးဝင်းတို့သည် ကျွန်ုပ် ဆရာတော်သိက္ခာတင်ပွဲ သို့ကိုယ်တိုင်ကြွရောက် ပါဝင် ချီးမြှင့်လိုကြသော်လည်း၊ အကြောင်းမညီညွှတ်၍ မကြွရောက်နိုင်သဖြင့် မိမိ၏ ကိုယ်စား မန္တလေးတိုင်းမင်းကြီးအား ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက် မိမိတို့၏ နှုတ်ဆက်စာများကို ဖတ်ကြားပြောရန် စီစဉ်လိုက်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်အားရ ၀မ်းသာစွာ ချီးကျူး၍ ကျေးဇူးဥပကာယတင်ပါကြောင်း နိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုသည် မကြာမီက ဘုရင်ဂျီဘုန်းကြီးများနှင့် ကိုရင်ကြီးများကို ရောမသို့ ဘုရားဖူးစေလွှတ်ခြင်း၊ အားဖြင့် လူမျိုးမရွှေး ဘာသာမရွှေး၊လွတ်လပ်ရေးတရားကို အထူးမြတ်နိုးသော စေတနာစိတ်ရှိကြောင်း၊ အကောင်အထည် ဖေါ်ခဲ့ပေပြီ။ ယခုလည်း တဖန် ပြည်ထောင်စုသား၏ ထူးကဲသော ဆရာတော်ဘိသိတ်ပွဲတော်သို့ ကိုယ်စာလှယ်အားဖြင့် ပါဝင်ဆင်နွဲပါသောကြောင့် ဘာသာကို လေးစားကြောင်း ကမ္ဘာအား အတိအလင်း ယနေ့ေ ကြငြာပြန်လေသည်။ ထိုအကြောင်းများကြောင့် မြန်မာပြည်မှာ နေထိုင်ကြသော ကက်သလစ်အသင်းဝင် ဆရာတော်များ ရဟန်းသံဃာများ ကိုရင်ကြီးများ သီလရှင်များနှင့် ဘုရင်ဂျီဘာသာတူ အားလုံးကလည်း ဤမျှလောက် ၀မ်းသာဘွယ် ကောင်းသော အခန့်သင့်အကွက်ကို ယူပြီး၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအား အမြဲသစ္စာရှိစွာ ရိုသေလေးစားပါမည့် အကြောင်း ပြည်ထောင်စုကြီးအားလည်း လုံးဝ ငြိမ်းချမ်းလျက် စည်ပင်သာယာစေရန် ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပေးပို့ကြပါမည်အကြောင်း၊ မန္တလေးသာသနာ၏ ခေါင်းဆောင်အဖြစ်နှင့် ကျွန်ုပ်က အသစ်တဖန် ယနေ့ ၀န်ခံပါသည်။ ဤအကြောင်း အားလုံးတို့ကိုလည်း ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနုအား ပြန်လည်လျှောက်ထားပါမည့်အကြောင်းကို တိုင်းမင်းကြီးအား မေတ္တာရပ်ခံ၍ ဤတွင် နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါသည်။ ၃
ဆရာတော် ဂျိုးဇက်ဦးဝင်းသည် ဗီယက်နန်အစိုးရ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ (၁၉၅၈)ခုနှစ်တွင် ဗီယက်နန်နိုင်ငံသို့ လေ့လာရေး ခရီး သွားရောက်ခဲ့သည်။ (၁၉၅၉) ခု ဒီဇင်ဘာလ (၁၉)ရက်နေ့တွင် ဂိုဏ်းချုပ်အာဏာ အပ်နှင်းခြင်း ခံရသည်။ (၁၉၆၂) ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၄) ရက်နေ့တွင် ဆရာတော်ဂျိုးဇက် ဦးဝင်းသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ စည်သူဘွဲ့ ချီးမြှင့်ခြင်း ခံရသည်။ ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော်ကြီးဦးဝင်းသည် သက်တော် (၆၄)နှစ်အရွယ် (၁၉၆၅)ခု မေလ (၂၉)ရက်နေ့တွင် ကင်ဆာရောဂါဖြင့် ပျံတော်မူသည်။ ပထမဆုံး ဗမာတိုင်းရင်းသား ဆရာတော်ကြီး ဖြစ်သည်။
၁။ The little Messenger. Vol 6,Sept,Nov,1954,PP.19-27
၂။ The little Messenger. Vol 6,Sept,Nov,1954,PP.19-27
၃။ The little Messenger. Vol 6,Sept,Nov,1954,P.28
ဖါသာရ်သြဂုတ်စတင်း ဦးဖေ (၁၉၀၂-၁၉၄၅)
(Fr.Augustine U Pe)
ဖါသာရ် သြဂုတ်စတင်း ဦးဖေသည် စစ်ကိုင်းခရိုင် မြောင်မြို့နယ် နဘက်ရွာ၌ (၁၉၀၂)ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၈)ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဆရာလှ ဒေါ်မုန်းတို့ဖြစ်သည်။ ငယ်နာမည်မှာ ပေတလူး မောင်ဖေဖြစ်သည်။ နဘက်ရွာ မူလတန်းကျောင်းတွင် မူလတန်း ပညာသင်ကြားပြီးနောက် (၁၉၁၃)ခုတွင် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းဝင်သည်။ ထိုမှတဆင့် ပီနန် ရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်တွင် ပညာကြားသည်။ (၁၉၂၆)ခု ဇန္န္န၀ါရီလ (၃၁)ရက်နေ့တွင် ဖါသာရ်ဂျိုးဇက် ဦးဝင်းနှင့်အတူ မန္တလေးမြို့ ရွှေနှလုံးတော်ဘုရားကျောင်းတွင် ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ သိက္ခာခံပြီးနောက် မန္တလေးမြို့ ရွှေနှလုံးတော်ကျောင်းတွင် နေရာချထားခြင်း ခံရသည်။ ထိုနောက် ကျောက်ဆည်စီရင်စု၊ ဇော်ဂျီရွာ၊ ချမ်းသာကုန်းရွာ၊ မြောက်ကိုင်းရွာ၊ မန်ကျည်းတောရွာ၊ကင်းလတ်ရွာ၊ ဆင်ဖြူရွာ အုပ်စုကို ကြည့်ရူရသည်။ (၁၉၃၆) မှ (၁၉၄၀)အထိ ချောင်းဦးမြို့နှင့် မုံရွာဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူရသည်။ (၁၉၄၁) မှ (၁၉၄၅) အထိ ရွာတော် ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူရသည်။ ဖါသာရ်သြဂုတ်စတင်း ဦးဖေ ရွာတော်ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူ အုပ်ချုပ်ရသောကာလသည် ဂျပန်များ အုပ်စိုးသော ဂျပန်ခေတ်ကာလ ဖြစ်သည်။ ဖါသာရ်သြဂုတ်စတင်း ဦးဖေမှာ ဂျပန်တို့၏ နှိပ်စက်မှုဒဏ်ကြောင့် (၁၉၄၅) ခုနှစ်တွင် ပျံတော်မူသည်။
မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (အပိုင်း ၂၀)
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 8:06 PM